Manery Olona Hiova Fivavahana ve ny Vavolombelona? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bichlamar Boligara Bosniaka Boulou Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kachin Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Maya Mazateky (Huautla) Mingrelian Mixe (Afovoany) Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Arabo) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Turkmène Tzotzil Télougou Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Tsia, tsy manao an’izany izahay. Izao no voalaza ao amin’ny Tilikambo Fiambenana, ilay gazetinay miely indrindra: “Tsy mety ny manery olona hiova finoana.” * Tsy manery olona hiova finoana izahay noho ireto antony ireto:
Tsy nanery olona hanaraka ny fampianarany mihitsy i Jesosy. Fantany mantsy fa ho vitsy ihany ny olona hihaino ny hafatra notoriny. (Matio 7:13, 14) Tafintohina noho ny zavatra nolazainy, ohatra, ny mpianany sasany indray mandeha. Navelany handeha anefa izy ireo fa tsy notereny hijanona.—Jaona 6:60-62, 66-68.
Nampianarin’i Jesosy an’ireo mpanara-dia azy fa tsy tokony hanery olona hiala amin’ny fivavahany izy ireo. Tsy tokony hanery olona hanaiky ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana izy ireo, fa hitady an’izay olona vonona hihaino an’izany.—Matio 10:7, 11-14.
Tsy misy dikany raha miova finoana ny olona iray satria noterena. Ny olona mivavaka amin’Andriamanitra amin’ny fo ihany mantsy no ankasitrahany.—Deoteronomia 6:4, 5; Matio 22:37, 38.
Mitaona olona hanaraka ny fivavahanay ve izahay?
Marina aloha fa mitory hatrany “amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany” izahay sady manao an’izany “ampahibemaso sy isan-trano.” Izany mantsy no didy ao amin’ny Baiboly. (Asan’ny Apostoly 1:8; 10:42; 20:20) Toy ny Kristianina voalohany, dia ampangaina izahay indraindray hoe mitaona olona hanaraka ny fivavahanay nefa tsy nahazo alalana hanao izany. (Asan’ny Apostoly 18:12, 13) Diso anefa izany. Tsy manery na iza na iza hanaraka ny fivavahanay izahay. Tokony havela hamantatra tsara momba ny zavatra iray kosa ny olona, araka ny hevitray, amin’izay izy afaka mifidy tsara an’izay harahiny.
Tsy manery olona hiova fivavahana izahay. Tsy misy ambadika politika koa ny zavatra ataonay, sady tsy tambazanay fanampiana na zavatra hafa ny olona mba ho lasa mpikambana ao aminay. Misy olona milaza ho Kristianina nefa manao an’ireo, ka manala baraka an’i Kristy. *
Manana zo hiova fivavahana ve ny olona?
Niala tamin’ny fivavahan’ny fianakaviany ilay mpaminany atao hoe Abrahama
Eny. Hita ao amin’ny Baiboly fa manana zo hiova fivavahana ny olona. Voaresaka ao fa maro ny olona nifidy ny tsy hanaraka intsony ny fivavahan’ny fianakaviany fa hanompo an’ilay tena Andriamanitra, ary tsy nisy nanery azy hanao izany. Anisan’izy ireny i Abrahama, Rota, ny olona sasany tany Atena, ary ny apostoly Paoly. (Josoa 24:2; Rota 1:14-16; Asan’ny Apostoly 17:22, 30-34; Galatianina 1:14, 23) Hita ao amin’ny Baiboly mihitsy aza fa zon’ny olona ny miala amin’ny fivavahana ankasitrahan’Andriamanitra, na dia tsy tsara aza ny miala amin’izany fivavahana izany.—1 Jaona 2:19.
Manana zo hiova fivavahana ny olona, araka ny Fanambarana Iraisam-pirenena Momba ny Zon’olombelona, izay antsoin’ny Firenena Mikambana hoe “fototry ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona.” Voalaza ao amin’io fanambarana io fa manan-jo “malalaka hiova fivavahana na firehana samihafa” ny olona rehetra, sady manana zo ‘hikaroka, handray, ary hampiely vaovao na hevitra’, anisan’izany ny hevitra mifandray amin’ny fivavahana. * Mazava ho azy fa manana adidy hanaja ny zon’ny hafa izay manana an’ireo zo ireo. Ataony an-tsaina fa manana zo tsy hiala amin’ny zavatra inoany sy tsy hanaiky an’izay hevitra tsy ekeny koa ny hafa.
Manao tsinontsinona ny ray aman-dreniny ve ny olona iray miova fivavahana satria tsy manao intsony ny fomban-drazana na ny fombafomba fanaon’ny fianakaviany?
Tsy voatery. Mampirisika antsika ny Baiboly mba hanaja ny olon-drehetra, na inona na inona fivavahany. (1 Petera 2:17) Mandidy antsika mba hanaja ny ray aman-drenintsika ny Baiboly, ary mankatò an’izany ny Vavolombelon’i Jehovah na dia tsy mitovy finoana aminy aza ny ray aman-dreniny.—Efesianina 6:2, 3.
Tsy ny olona rehetra no manaiky an’izay lazain’ny Baiboly. Hoy ny vehivavy iray lehibe tany Zambia: ‘Toy ny hoe mivadika amin’ny fianakavianao sy ny fiaraha-monina ianao, any aminay, raha miova finoana.’ Izany no nanjo an’io vehivavy io tamin’izy mbola tanora. Nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy tamin’izany, ary tsy ela taorian’izay dia tapa-kevitra ny hiova fivavahana. Hoy izy: ‘Naverimberin’i Dada sy Neny tamiko foana hoe tena nahatezitra azy ireo ny nataoko ary nandiso fanantenana azy ireo aho. Mafy be tamiko izany, satria tena tsy te hampalahelo azy ireo aho. Tsy hoe mivadika amin’ny fianakaviako aho raha manapa-kevitra fa tsy hivadika amin’i Jehovah sy tsy hanaraka intsony ny fombafomban’ilay fivavahako taloha.’ *
^ feh. 1 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana 1 Janoary 2002, pejy 12, fehintsoratra 15.
^ feh. 6 Namoaka didy, ohatra, i Charlemagne Mpanjaka tamin’ny taona 785 tany ho any, hoe hovonoina ho faty izay mponin’i Saxe tsy manaiky ho lasa Kristianina sy hatao batisa. Nisy fifanekena nantsoina hoe Fifaneken’i Augsbourg koa tamin’ny taona 1555, ary nanao sonia azy io ireo antokon’olona niady tao amin’ny Fanjakana Romanina Masina. Voalaza tao fa tsy maintsy Katolika na Loteranina ny mpitondra rehetra ao amin’ny faritanin’ilay fanjakana, ary tsy maintsy manaraka ny fivavahan’ilay mpitondra ny vahoakany. Nasaina nifindra monina izay tsy nanaiky hanao izany.
^ feh. 8 Misy fanambarana mitovitovy amin’izany koa ao amin’ireto: Sata Afrikanina Momba ny Zon’olombelona sy ny Zon’ny Vahoaka, Fanambarana Amerikanina Momba ny Zo sy Andraikitry ny Olom-pirenena, Sata Arabo Momba ny Zon’olombelona tamin’ny 2004, Fanambarana Momba ny Zon’olombelona Nataon’ny ASEAN (Fikambanan’ny Firenena any Azia Atsimoatsinanana), Fifanarahana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona, ary ny Fifanarahana Iraisam-pirenena Momba ny Zo Sivily sy Politika. Na ireo firenena namoaka an’ireo fanambarana ireo aza anefa miovaova hevitra rehefa tena hampihatra an’ireo.
^ feh. 10 Jehovah no anaran’ilay tena Andriamanitra, araka ny Baiboly.
Hizara Hizara Manery Olona Hiova Fivavahana ve ny Vavolombelon’i Jehovah?
ijwfq no. 40
Manao Asa Misionera ve Ianareo?